Ninive Tany Asyria, Arofanina Tany Israely | Fantatrao Ve?
Ny Tilikambo Fiambenana | Aprily 2013
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Mooré Myama Ngabere Norvezianina Nzema Oromo Ossète Ourdou Papiamento (Curaçao) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tsonga Twi Tzotzil Uruund Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Nahoana i Ninive no nantsoina hoe “tanàna mpandatsa-dra”?
Sarina miaramila mitondra lohana babo ary manipy an’izany hivangongo eo amin’ny toerana iray
I Ninive no renivohitry ny Fanjakana Asyrianina. Tanàna natanjaka be izy io, ary feno lapa sy trano fivavahana tsara tarehy be tany. Feno arabe nikodàna sy manda avo be koa tany. Nantsoin’i Nahoma, mpaminany hebreo, hoe “tanàna mpandatsa-dra” anefa izy io.—Nahoma 3:1.
Nety tsara mihitsy ny niantsoana azy an’izany. Na ny sary mivohitra tany amin’ny lapan’i Sankeriba, tany Ninive, aza mantsy manamarina fa mpampijaly olona ny Asyrianina. Nisy sary, ohatra, mampiseho olona manongotra ny lelan’ny gadra iray. Afatotra ny tanany, ary misy olona maromaro mitazona azy eo amin’ny tany. Aderadera amin’ny soratra vita sokitra koa fa nasiana faraingo vy ny orona na ny molotry ny babo. Nisy tady nafatotra tamin’ireny vy ireny ary notaritina tamin’iny ilay babo. Notapahina koa ny lohan’izay mpanjaka resy. Nasaina niambozona an’ireny loha ireny toy ny rojo avy eo ny olona ambony azo babo.
Niresaka ny fanaon’ny Asyrianina koa i Archibald Sayce, mpikaroka momba an’i Asyria fahiny. Rehefa nandresy tanàna iray, hono, izy ireo dia “feno lohan’olona tapaka teny amin’izay nandalovany. Nodorany velona ny ankizilahy sy ankizivavy, na nampijalijaliny be. Nofantsihany ny lehilahy, na nendahany tamin’izy mbola velona ny hodiny, nopotsiriny ny masony, na notapahiny ny tanany, ny tongony, ny sofiny, ary ny orony.”
Nahoana no nasian’ny Jiosy fahiny arofanina ny tampon-tranony?
Nandidy ny Jiosy Andriamanitra hoe: “Asio arofanina ny tampon-trano raha manao trano vaovao ianao. Amin’izay dia tsy hahatonga trosan-dra amin’ny tranonao ianao. Mety hisy olona hianjera mantsy avy eny.” (Deoteronomia 22:8) Tena nilaina ilay arofanina, satria tia nampiasa ny tampon-tranony ny Jiosy fahiny.
Matetika no nataon’ny Jiosy marin-tampona ny tranony. Nety tsara mantsy raha teny ambony teny no nitanina andro, na naka rivodrivotra, na nanao raharaha. Nahafinaritra koa ny natory teny, tamin’ny andro mafana. (1 Samoela 9:26) Teny koa ny mpamboly no nanahy vary talohan’ny nitotoana azy, na nanahy aviavy sy voaloboka.—Josoa 2:6.
Nampiasaina tamin’ny resaka fivavahana koa ny tampon-trano. Nanao an’izany na ny mpanompon’Andriamanitra na ny mpanompo sampy. (Nehemia 8:16-18; Jeremia 19:13) Nankeny an-tampon-trano, ohatra, ny apostoly Petera tamin’ny 12 antoandro, mba hivavaka. (Asan’ny Apostoly 10:9-16) Nahafinaritra erỳ koa ny naka aina teny an-tampon-trano raha nisy voaloboka na ravina palmie nanalokaloka teny.
Milaza ny boky Ilay Tany sy Ilay Boky (anglisy), fa “teny ivelan’ny trano” ny tohatra nankany an-tampon-trano, saingy “tao anatin’ny tokotany” ihany. Tsy voatery nankao an-trano àry ilay olona rehefa avy teny an-tampon-trano. Mifanaraka amin’ny tenin’i Jesosy mihitsy izany, tamin’izy nilaza hoe mila mandositra haingana ny Kristianina rehefa ho rava i Jerosalema. Hoy izy: “Aoka izay eo an-tampon-trano tsy hidina haka ny fananany ao an-tranony.”—Matio 24:17.
Boky Iray Azonao Itokisana—Fizarana 2
Fantatrao Ve?—Aprily 2013
MATOAN-DAHATSORATRA Mety Hisy Dikany Ihany ve ny Fiainana?
MATOAN-DAHATSORATRA Afa-po Tamin’​ny Fiainany i Jesosy
MATOAN-DAHATSORATRA Tahafo i Jesosy dia ho Afa-po Amin’​ny Fiainana Ianao!
MANOVA OLONA NY BAIBOLY “Ratsy Toetra Be Mihitsy Aho Taloha”
MANATÒNA AN’ANDRIAMANITRA “Mangataha Foana dia Homena Ianareo”
TAHAFO NY FINOAN’IZY IREO “Niara-nandeha Tamin’​Andriamanitra Izy”
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA Te Hanana Fiainana Mahafa-po ve Ianao?
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA Te Hanana Fiainana Mahafa-po ve Ianao?
Te Hanana Fiainana Mahafa-po ve Ianao?
NY TILIKAMBO FIAMBENANA Te Hanana Fiainana Mahafa-po ve Ianao?